ANYỊ NA-EGBOCHI NTINYE NKE NGWANRỌ ACHỌGHỊ YA RUO MGBE EBIGHI EBI - NKE KACHA MMA - 2020
Ncheta nke mmadu abughi nke zuru okè ma ya mere, o bu ihe kwere omume na onye ogha chefuru okwuntughe iji nweta akuko ya na netiti netiti netiti Odnoklassniki. Kedu ihe a ga-eme na nghọtahie dị otú ahụ na-ewe iwe? Isi ihe ị ga-eji nọrọ jụụ ma ghara ịtụ ụjọ.
Anyị na-ele paswọọdụ gị na Odnoklassniki
Ọ bụrụ na ọbụlagodi otu ugboro chebere paswọọdụ gị mgbe ị banyere n'ime akaụntụ Odnoklassniki gị, ị nwere ike ịnwa ịchọta ma hụ okwu ederede na ihe nchọgharị ị na-eji. Mee ka ọ dị mfe ọbụlagodi onye ọrụ novice nwere ike ijikwa ya.
Usoro 1: Chekwaa okwuntughe na ihe nchọgharị
Site na ndabara, ihe nchọgharị ọ bụla maka mma nke onye ọrụ na-echekwa okwuntughe nile i jiri na saịtị di iche. Ma ọ bụrụ na i mebeghị mgbanwe na ntọala ihe nchọgharị Ịntanetị, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ koodu ederede echefuru na ibe echekwara na ihe nchọgharị ahụ. Tụlee otu esi eme nke a na ihe atụ nke Google Chrome.
Meghee ihe nchọgharị, na aka nri aka nri pịa bọtịnụ nwere oghere vertical atọ, nke a na-akpọ "Ịtọlite ​​na Ijikwa Google Chrome".
Na menu na-egosi, họrọ ihe "Ntọala".
Na ibe mwube ihe nchọgharị anyị na-enweta akara "Mgbakwunye", nke anyị ji aka ekpe.
Ọzọkwa na ngalaba "Okwuntughe na ụdị" họrọ kọlụm "Ntọala Ntugharị".
A na-echekwa okwuntughe niile i jiri na saịtị dị iche iche echekwa ebe a. Anyị ga-achọ n'etiti ha okwu koodu maka akaụntụ na Odnoklassniki. Anyị na-achọta eriri dị mkpa, anyị na-ahụ nbanye anyị na Odnoklassniki, ma maka ihe ụfọdụ kama paswọọdụ, e nwere asterisks. Ihe ị ga-eme
Pịa na akara anya "Gosi paswọọdụ".
Emela! Ọrụ ahụ bụ ilele okwu koodu gị maka Odnoklassniki n'ụzọ gara nke ọma.
Hụkwa: Otu esi ele okwuntughe echekwara na Mozilla Firefox, Yandex Browser, Opera
Usoro nke 2: Element Study
E nwere ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na igosipụta ihe omimi na mpaghara okwuntughe na peeji nke Odnoklassniki, ị nwere ike iji njikwa ihe nchọgharị iji chọpụta akwụkwọ na nọmba na-ezo n'azụ ha.
Anyị na-emeghe weebụsaịtị odnoklassniki.ru, anyị na-ahụ paswọọdụ anyị na echefu echefu n'ụdị ntụpọ. Kedu ka ị ga - esi hụ ya?
Pịa aka nri na paswọọdụ ubi wee họrọ ihe dị na menu ndọpụta. "Nyochaa mmewere". Ị nwere ike iji ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl + ịgbanwee + m.
Nlekọta na-egosi n'akụkụ aka nri nke ihuenyo, nke anyị nwere mmasị na ngọngọ na okwu "paswọọdụ".
Right pịa na nghoputa ahọrọ na n'ime menu egosiri na pịa akara "Dezie àgwà".
Hichapụ okwu ahụ "paswọọdụ" kama dee: "ederede". Anyị na-agbanye na igodo ahụ Tinye.
Ugbu a mechie njikwa ma gụọ okwuntughe gị na ubi kwesịrị ekwesị. Ihe niile gbanwere!
Anyị jikọtara anyị abụọ ụzọ iwu iji chọpụta paswọọdụ gị na Odnoklassniki. Kpachara anya ka ị ghara iji ụlọ ọrụ ndị a jụrụ ajụ na Intanet. Na ha ị nwere ike idafu akaụntụ gị ma gbanye kọmputa gị na koodu obi. N'okwu ndị dị oke njọ, a ga-enweta nkwupụta echefuru echezọ site na ngwá ọrụ pụrụ iche na enyemaka Odnoklassniki. Maka ntuziaka zuru ezu banyere otu esi eme nke a, gụọ isiokwu ọzọ na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Iweghachite paswọọdụ na Odnoklassniki
https://termotools.com ig.termotools.com © Nke kacha mma 2020